"Imfihlakalo East" - isidlaliso wathola Garcinia. le mbali usuthandwa hhayi ngenxa isikhalazo zayo yobuhle. It is kabanzi emakhishini yamazwe amaningi. Garcinia Cambodian - esimila siluhlaza bukhule e-Asia, ikakhulukazi Cambodia nasezindaweni ezizungezile. It kungokwalabo ekilasini sealers, clusiaceae umndeni. Okwamanje, kunezinhlobo ezingaba ngu-500 zama-Garcinia Cambodian - zikhula hhayi kuphela e-Australia nase-Asia, kodwa futhi e-Afrika. Le ndawo inikeza amathuba amaningi ukuthi abantu abahlukile. izithelo Garcinia cambogia abukeka afana tangerines elikhulu noma amathanga amancane. Ezinye eziqhathanisa amakhabe ezincane. Kuyo yonke le minyaka, Garcinia yaseCambodia, izibuyekezo mayelana kakhulu indumiso, isetshenziswa cookery at yokukhiqiza of marinades, kusaladi nososo. Ngakho, njengoba ngokuvamile okusetshenziselwa ikhasi umbungu - nengaphakathi, nakuba kuba ezidliwayo, has cishe awekho ukunambitheka.
Garcinia Cambodian njengoba isitshalo okwelapha
Imbali amakhulu ngamakhulu eminyaka isetshenziswa kwezokwelapha, e-Eastern India kanye naseNingizimu Asia, isetshenziswa njengendlela laxative, i-ejenti ukuthi ngcono ukugaya, kanye namathuluzi nge kokuya esikhathini okungajwayelekile. Ngo-Ayurveda isithelo Garcinia endaweni ekhethekile. Abelaphi yeNdiya lasendulo kwamakhulu eminyaka yokuphila isipiliyoni anqwabelene isicelo zalesi sitshalo. It yaphawula ukuthi bayathinteka emagxolweni Garcinia cambogia iphumelela kakhulu ekwelapheni vodyanok, rheumatism, isimila ingozi izifo wokugaya ukudla futhi ukungasebenzi nomjikelezo wokuya esikhathini. Extract zalesi sihlahla lalisetshenziswa njenge- anthelmintic.
Garcinia Cambodian uyambula izimfihlakalo zayo
abantu Modern ngokwethukela efuna usizo nemvelo - "gorged" zokwenziwa kanye okubangela umonakalo ongalungiseki emvelweni, sagcina waqala ukuba bayihlole kabusha ukubaluleka. odokotela Allopathic, nakuba zithobele ukwelapha ngokwendabuko kwezifo ezihlukahlukene, umphumela omuhle kusukela ukusetshenziswa Izithako zokudla Lokudabuka isitshalo is hhayi ngaphandle. Ukuphumelela izitshalo zokwelapha kuqinisekiswa ucwaningo oluningana. Hhayi indiva lolu daba party kanye Garcinia Cambodian - emva ucwaningo eziningi ososayensi ucwaningo bathole ukuthi yini imfihlo ukuphumelela kwalesi simila kuba nenkinga nge ukhuluphele noma ukugaywa.
I Garcinia uqweqwe iqukethe lokuhlushwa eliphezulu hydroxycitric acid. Izithelo yalolu ketshezi liyatholakala, kodwa ngezinga elincane. Wonke umuntu owazi ezivamile citric acid - ke kuyisici esihlupha bonke izithelo ezisawolintshi, isetshenziswa cishe kuyo yonke indawo - izimonyo ekulondolozweni nokupheka - futhi kalula kwemiqondo. Hydroxycitric acid, noma Götz-citrine - into esetshenziswa ukulawula kanye nokunciphisa isisindo.
Umthelela ukusetshenziswa hydroxycitric acid yaqale echazwe ososayensi American in the 80s. Ngemva kwalokho, ketshezi yayisiboshwe kaningi evivinywa amaqembu yokulinga labantu abaphethwe ukukhuluphala ngenxa umzimba iziyaluyalu noma ukudla kakhulu. Naphezu nezinto eziningi ezivivinya, imiphumela emibi evela ukusetshenziswa i akhiphe Garcinia cambogia sekutholakale. Ngokuphambene, u-50% isixazululo Götz-citrine etholakala emagxolweni lesi sitshalo, kunomphumela eziyinkimbinkimbi emzimbeni, ukunciphisa ukudla amazinga cholesterol egazini.
Ngokusho ucwaningo, ukusetshenziswa i akhiphe Garcinia cambogia ivumela ukunciphisa esesuthi okungenani u-40% emahoreni ayisithupha. Ngaphezu kwalokho, lo synthesis fat kubambezela by 40-70%, ngakho ngokweqile yayo ngokwemvelo excreted. Lapho beqeda isenzo reverse umphumela umuthi ningagcini - isifiso sokuba "benze i" kilojoule elahlekile ingekho, futhi umzimba kubambezela cishe.
Okwamanje, Garcinia cambogia izithelo akhiphe iza ngesimo Izithako zokudla, kanye ingxenye amalungiselelo eziyinkimbinkimbi for isisindo ukulahlekelwa. Ziyakwazi ethandwa kakhulu, ngempumelelo ngempela hhayi ayebiza kungase kubonakale efika kuqala. Ngakho, Garcinia Cambodian ngempela ongavamile imbali - ukusetshenziswa ezindaweni eziningi izinto eziphathelene nempilo yomuntu sikwenza kube isitshalo ozithandayo kwezizwe eziningi zomhlaba.